Bavele enkantolo ababanjwe nemiboko yezindlovu
IZIMPONDO namazinyo ezilwane okutholwe oKlebe nophiko lwamaphoyisa abhekela ubugebengu obuhleliwe ngenkathi begasela emzini wabasolwa abebedayisa izitho zezilwane zasendle eZimbali Eco Estate Isithombe: SITHUNYELWE
Mbali Khanyile | November 19, 2021
OKLEBE nophiko lwamaphoyisa abhekela ubugebengu obuhleliwe ePort Shepstone babophe abasolwa ababili abaneminyaka engu-27 no-57 ngemuva kokuthi betholwe nemiboko yezindlovu.
Kuthiwa amaphoyisa athole umbiko ngabasolwa okubikwa ukuthi bebeyidayisa imiboko yezindlovu endlini abebehlala kuyo.
Ithimba lamaphoyisa ebelisebenza ngomshoshaphansi kuthiwa liphuthume endaweni obekuhlala kuyo abasolwa eZimbali Eco Estate maqede labafaka ozankosi emumva kokuthi libathole nezitho zezilwane zasendle.
Phakathi kokutholwe amaphoyisa endlini yabasolwa ngenkathi esesha kubalwa u1.3 kilogram wezingcezu zomboko wendlovu, amazinyo ezingulube zasendle angu-14, amazinyo omkhoma angu-19, amazinyo endlovu abaziwe amane, amazinyo amabili emvubu, amazinyo endlovu anqunyiwe angu-47 nemiboko yezindlovu engu-15.
Lezi ztho kubikwa ukuthi zingabiza uR400 000 sezizonke.
Okhulumela oKlebe, uCaptain Simphiwe Mhlongo, uthe abasolwa bavele enkantolo ngoLwesithathu.